Abatshalizimali bashiya ukuhweba ngamasheya kwendabuko, bafuna imithombo emisha yemali engenayo evela ku-Forex. - Reg Trading
Post Tags zulu
Abatshalizimali bashiya ukuhweba ngamasheya kwendabuko, bafuna imithombo emisha yemali engenayo evela ku-Forex.
Mhlawumbe, abantu baya ngokuhweba nge-forex bebodwa. Ubhadane lwenze ukuhweba kwangaphambili kwaduma kakhulu kunakuqala.
Yize kuncike ekutheni kube nomthelela othile esikhathini esithile, okwamanje, izinga lokushintshaniswa lizoqhubeka nokusabela ekushayweni, kukhuphuke izinombolo ekuhwebeni kwe-Forex namathuba okuba kwenzeke ushintsho. Phuma.
Akekho ongabikezela ngokunembile imakethe ye-Forex ngo-2022, njengoba ikusasa lingaqinisekile. Mhlawumbe kungahle kube nokukhula okuphazamisayo nakakhulu kumandla omnotho emhlabeni ngenxa yokubuya nokukhula kwe-coronavirus, ethinta kakhulu imali. abadayisi njengamanje bashiya imali bengenzi lutho futhi abayitholi indawo ephephile efaka igolide. ngakho-ke bavame ukubheka ithuba lokunyusa inani labo lenzuzo ngokwanele bese bethatha ikhefu.
Ochwepheshe bezezimboni nabatshalizimali bazoncika ezimali eziphephile futhi babe nembuyiselo enkulu kuma-indices.